“လက်ဆော့ထားသော ပုံများ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » “လက်ဆော့ထားသော ပုံများ”	10
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 18, 2015 in Photography | 10 comments
အရင်က ကျနော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုမပြင်ဘဲ ဒီအတိုင်းတင်လေ့ရှိပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ဓါတ်ပုံသမားတွေနဲ့ပေါင်းမိတော့ အနည်းနဲ့အများ ပုံကိုပြင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ကျနော်မိတ်ဆွေတွေက ကျနော်ကိုလဲ ပုံပြင်ဘို့ ပြောပေမယ့် ကျနော်က ပြင်တာကိုသိပ်မနှစ်သက်။
“မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဗျာ ဖီးဖီးလိမ်းလိမ်းနေရင် ပိုမလှပေဘူးလား”လို့ပြောလာတော့
ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်လွန်လွန်ကဲကဲ အလှပြင်ထားရင်ကျနော်က မနှစ်သက်တတ်။
ထို့အတူဘဲ ပုံကို လွန်လွန်ကဲကဲပြင်ထားရင် ကျနော်သဘောမကျပါ။
ကျနော်က ဖိုတိုရှော့ မသုံးတတ်ပါ။
ကိုစိန်သော့ပြပေးထားတော့ လိုက်ရွမ်းနဲ့တော့ နည်းနည်းဆော့တတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာလေးက ကျနော်ခေတ္တရောက်နေတဲ့ရွှေလီမြို့ရဲ့ တောင်ဘက်က စိုက်ခင်းတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက် က အလည်ရောက်လာတော့
မြစပဲရိုး says: B&W နဲ့ မြင်ရတာ အဆန်းဖြစ်နေရတာပေါ့။
အရှုပ်ထဲ မှာ ရှင်းအောင် နေဖို့ ထိပ်တက်နားနေ တဲ့ ငှက်လေး ကို သဘောကျမိတယ်။ :-))
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကာလာနဲ့ ရိုက်ခဲ့တာကို အဖြူအမဲ ပြန်ပြောင်းလိုက်တာပါ ကိုလတ်ကြီး
အဲ့ငှက် ကလေး လို ကျနော် နေတတ်အောင်ကြိုးစားပါအုံးမယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: သဘာဝရဲ့ အငွေ့အသက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ. . .
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တောတောင်တွေ လယ်ကွင်းတွေဘက်သွားရာတ မြန်မာပြည်ဘက်လဲ အေးချမ်း
အောင် မိုးသူ says: ပထမဆုံးပုံလေး နှစ်သက်မိ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဖြူအမဲပြောင်းလိုက်မှ ပိုလှသွားတာ
ကာလာနဲ့ က ဒီလောက်မလှဘူးရယ်
Mike says: .မိုးသားတိမ်လိပ်တွေနဲ့ အုံ့ကာသာမှိုင်းတော့တယ်
.၀ိုးတ၀ါး အမှိန်အရိပ်တွေနဲ့ တိုးကာသာလွမ်းတော့တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဧည့်သည်လိုက်ပို့ရင်း ရောရိုက်လာတာ သူစိတ်ကြိုက်ပုံရ မရတောင် မမေးလိုက်မိအောင်ကို အာရုံတွေများခဲ့တာ ကိုမိုက်ရေ
တောင်ပေါ်သား says: I like number 8 .
8 က ဓါတ်ပုံစကားနဲ့ပြောရင် TONE မကွဲ ဘူးဆိုရမယ်
အရောင်တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု သိသာအောင်မပြတ်